Brody PR: Rahoviana ianao no handrehitra ny fifandraisan'ny daholobe | Martech Zone
Alarobia 19, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany, miaraka amin'ireo bilaogera, mpanao gazety ary mpitarika indostrialy an-jatony maro hafa, nahazo mailaka tsy nisy fangatahana avy tamin'i Beth Brody aho (beth@brodypr.com) miaraka amina fanambarana an-gazety momba ny Jump Start Media Media Mamoaka boky vaovao E-Marketing momba ny haino aman-jery sosialy ho an'ny orinasa kely.
Tsy dia ratsy loatra fa SPAM io, fa nanolotra an-karihary ny lisitry ny mpandray ny anarana sy ny adiresy mailaka an'ny olon-drehetra. Naheno an'izany mpametraka?
Tsy haiko i Beth ary tsy haiko Brody PR, fa hampahafantariko azy ireo, ary koa ny vinavinany sy ny mpanjifany rehetra, fa mendrika ny valiny lehibe izay azon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Valiny iray (valiny rehetra) ao anaty kofehy mailaka (mitohy) avy amina indostrialy malaza iray mivaky toy izao:
Esory amiko ity f —- lisitra izay tsy nangatahako mihitsy ary tsy afaka nisoratra anarana.
Ny lisitry ny olona nankanesany tany dia ny iza no iza ny influencers. Mandritra ny fandokafako izay nataoko ny lisitra, sosotra ihany koa aho fa ny orinasam-pifandraisam-bahoaka dia manangona lisitra toy izao mba hamelezana anay fotsiny. Azoko antoka fa ny e-Book an'ny media sosialy Start Start Jump dia boky e-tsara… saingy tsy handeha hisintona azy aho, hampifandray azy io, na hanome sosokevitra azy satria nokasihin'ny orinasan-dry zareo PR aho.
Ireo orinasam-pifandraisam-bahoaka, betsaka noho ny olon-drehetra ao amin'ny indostria, dia tokony hanaiky ny fiantraikan'ny mailaka tsy ampoizina sy ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana mifototra amin'ny fahazoan-dàlana amin'ity tontolon'ny spam ity. Manana taratasy fifandraisana amin'ny tranokalako aho mba hahafahan'ny olona mandefa andalana amiko - izany no fomba tsara hifandraisan'ny orinasa PR amiko… na amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy 80 hafa izay ifandraisana amiko. Kamo tsotra PR io, madio sy tsotra.
Ankehitriny ny adiresy mailaka dia eo am-pelatanan'Andriamanitra mahalala-iza satria ny masoivohon'ny PR iray dia nanadino ny lalàna rehetra Fifandraisana amin'ny vahoaka. Amin'ny endriny tsara dia navoakako izao ny adiresy mailaka ho hitan'izao tontolo izao. Aza misalasala mandatsaka naoty Bet rehefa manana ny fisondrotanao manaraka - azoko antoka fa ho tian'izy ireo izany!
Brody dia ho ampiana amin'ny lisitra lava an'ny PR Spammers by Gina Trapani. Mampametra-panontaniana ahy izany raha toa ka mety hiatrika fitsaram-bahoaka noho ny fanitsakitsahana ny hetsika CAN-SPAM i Brody na tsia satria tsy nanome fomba hialana amin'ny serasera be loatra izy ireo.
Amin'ny manaraka ianao manakarama orinasa PR dia tadiavo ny fomba hahitan'izy ireo influencer eo amin'ny tsena sy ny fomba hanatonany azy ireo. Raha toa ny Brody PR dia aza manakarama azy ireo. Tsy azon'izy ireo izany. Raha manana orina toa an'i Brody PR ianao izay mitarika influencer, roahy izy ireo. Hanao fahavoazana bebe kokoa izy ireo noho ny tsara amin'ny marikao.
Famakiana fanampiny: Ahoana no namonoan'ny mailaka tokana ny orinasa PR, Mety ho nankasitraka fialan-tsiny aho, Tsy mahomby ny fifandraisana amin'ny daholobe: Lesona iray ary tsy fahita firy… Mino aho fa mbola ho avy ny maro…
Fanavaozana: 8/21/2009 Rec'd tena tsara avy any amin'i Beth Brody androany miala tsiny noho ny snafu, i Beth dia manana lahatsoratra 'lesona ianarana' ho avy tsy ho ela.
Fanavaozana manan-danja: 10/19/2009 Makà fanamarihana iray hafa avy amin'ny PR Brody iray hafa fa diso ny rohy nahazo anay tao amin'ny Paositra! Miala tsiny indrindra izahay ary nohavaozina ireo rohy.
Tags: hanomeAo amin'ny App AdsKernTypography
Ny orinasam-pifandraisan'ny daholobe dia vonona hanararaotra media sosialy
20 Aogositra 2009 amin'ny 12:17 PM
Ny ampahany tsara indrindra momba ny Brody PR dia rehefa nitety ny tranonkalany aho, ny zavatra voalohany hitako dia ny sary lohan'izy ireo izay manambara am-pireharehana hoe "Agence with a conscience ..."
Raha tsy Irony izany dia tsy haiko hoe inona izany.
20 Aogositra 2009 amin'ny 1:17 PM
Doug - ny olona manao ireo karazan-javatra ireo dia manana fahatsapana tsy mampino fahatokisan-tena. Jereo ny lisitry ny mpanjifany; tsy gaga ve ianao? Na dia tsy nety nisafidy aza ianao, ny zavatra holazainy aminao dia zava-dehibe foana, mamiratra tokoa ka azony antoka fa hankasitrahanao fa nanome voninahitra anao tamin'ny fisian'ny mailaka anao izy.
Tsy azonareo ry haino aman-jery sosialy raha ny tena zava-dehibe no resahina.
20 Aogositra 2009 amin'ny 1:42 PM
Misaotra namoaka ity, Doug. Fifandraisana amin'ny daholobe izy ireo, avy eo misy ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery, ary avy eo ny fifandraisan'izy ireo amin'ny haino aman-jery sosialy (ny elo tokony hianjeran'ireo mpanafika). Ny fampifangaroana ireo telo ireo ho fe-potoana iray dia tsy fahombiazana tsy tapaka manerana ny indostria, ary porofo manaporofo fa tsy azon'ny ankamaroan'ny orinasa izany.
20 Aogositra 2009 amin'ny 2:38 PM
Tena malama ny fomba nilatsahanao izay noheverinao fa nanan-kery teo amin'ny laharana voalohany
20 Aogositra 2009 amin'ny 5:59 PM
20 Aogositra 2009 amin'ny 6:15 PM
wow - eny ity dia f-up be io fa raha tsy hoe lesoka miverimberina izy ireo dia tokony hanome ny tombotsoan'ny fisalasalana ianao. Manana andro ratsy ny olona ary manao fahadisoana indraindray. Ahoana raha misy olona miantso ny lohanao ary maka mpanaraka anao rehefa avy nanao fahadisoana ianao nandritra ny andro? Ity lahatsoratra ity dia mety ho nitombina ihany raha tsy nesoeso ampahibemaso ny masoivoho sy ny dokambarotra momba izany. Mazava fa tsy maintsy manana andro ratsy ianao mba ho tezitra sy milisy.
21 Aogositra 2009 amin'ny 2:56 PM
Tsy manaiky aho. Ary raha ny tena izy, heveriko fa henjana tsy araka ny tokony ho izy ity lahatsoratra ity. MAHASOA ny vehivavy mahalala BCC. Diso izy. Ny tsipika CC sy BCC dia milimetatra fotsiny.
Manaiky ianao fa tsy mahalala an'i Beth Brody na Brody PR. Azonao lazaina eo imasony ve ireo zavatra nolazainao tamin'ity lahatsoratra ity? Azonao atao ve ny miteny amin'ny mpanjifany eo alohany fa tokony horoahin'izy ireo izy satria nanao hadisoana tamin'ny tsy fametrahana olona eo amin'ny tsipika BCC? Tsy fantatro ianao, ka tsy haiko ny valin'io fanontaniana io, fa te hahalala aho.
Ity dia FAR avy amin'ny spam ratsy kokoa. Tsy mahazo tena spam ve ianao?
Nanao fahadisoana marina ity vehivavy ity ary tsy mety tanteraka ny valiny. Izay rehetra namaly, anisan'izany ny teny nampiasanao dia HALALANA izay ataon'izy ireo. Izy ireo no nandoka ny olon-kafa tamin'ny fahatsiarovan-tena. Ary azoko antoka fa tsy vao sambany no nitrangan'izany. Tiako ho fantatra ny eritreritrao tao amin'ny lahatsoratra nanoratako momba ilay sanganasa:
Ny «gurus» sy ny bilaogera amin'ny media sosialy dia fanesoana egotista
Ary raha mila tantara tsy fahombiazan'ny PR ianao dia vakio ity. Izy io dia fizarana roa izay ahitan'ny mpanjifa miaraka amina fikafika tanteraka amin'ny farany.
Hey PR, tsy fitaovana ampiasaina ny bilaogera
Fanavaozana: tantaram-piainana ratsy momba ny PR. Mpanjifa ny PR firm.
21 Aogositra 2009 amin'ny 4:59 PM
1. Tsy izaho no nanomboka an'ity andiana hetsika mahatsiravina ity, dspark. Tsy maintsy nanao izany aho.
2. Firenena mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro io. Ity no JOBA ary, toa ny EXPERTISE-n'izy ireo. izany dia toy ny manontany raha tsy marary saina amin'ny Dokotera ny marary tapaka tongotra tsy nahy.
3. mailaka ara-barotra tsy nisy fangatahana izany ary TSY MISY opt-out.
4. Nanangana miafina an'ity lisitr'ireo adiresy mailaka ity izy ireo nefa tsy fantatry ny mpandray.
Tsy hadisoana marina izany - nilaina am-bolana maro vao natambatra ity lisitra ity ary manana ny mpanjifany mandoa vola amin'ity serivisy ity izy ireo. Tsy marina izany, ny mifanohitra amin'izay no izy - na ny ratsy no ny mamitaka.
22 Aogositra 2009 amin'ny 11:44 PM
Tsy maintsy mavesatra aminao ny tsy nanao fahadisoana mihitsy, Douglas. Midera anao aho noho izany, mba tsy hahadiso hevitra mihitsy ka tsy hanao fahadisoana amin'ny PR.
Miaraka amin'i David aho amin'ity. Ao an-tampony sy tsy ilaina, saingy tsy maintsy efa nahatsapa ianao fa mila mandeha lavitra kokoa noho ny lahatsoratra hafa.
23 Aogositra 2009 amin'ny 4:46 PM
Tsy nilaza mihitsy aho hoe tsy nanao hadisoana. Rehefa nanao ny tsy nety aho dia nihaona tamin'ny vokany. Raha tsy nisy ny fiatraikany, tsy ho fantatsika fa hadisoana izany, sa tsy izany? Mifandray amin'i Ramatoa Brody aho, nandefa ny boky nosoratako momba ny bilaogy momba ny asa aman-draharaha, ary nanolo-tena hanampy azy mafy amin'izay ilainy.
Aug 24, 2009 amin'ny 5: 45 AM
Mazava ho azy fa nanao izany ianao. Mialà amin'ny altruisme rehetra.
21 Aogositra 2009 amin'ny 9:20 PM
Tsy fantatro ny momba an'i Doug, fa hiteny mivantana an-dRamatoa Brody mivantana aho raha manana fotoana mety.
Heveriko fa ratsy kokoa noho ny spam nentim-paharazana. Ny orinasam-pifandraisana dia tsy mpanao dokambarotra. Heverina fa mahay mampita hafatra izy ireo mahalala izay karazana hafatra hampifaly ny mpijery ary inona ny tetika hahatezitra azy ireo. Raha misy tokony hahafantatra ny fomba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny hafatra dia miorina amin'ny PR izy io.
23 Aogositra 2009 amin'ny 4:47 PM
Tena nanararaotra tokoa aho. Nifandray tamiko tamin'ny alàlan'ny mailaka i Beth Brody ary nangataka fahazoan-dàlana hanonona ny bilaogiko ao amin'ny bilaoginy vaovao, Lesona ianarana. Ary nangataka fialantsiny ofisialy aho - dia noraisiko. Heveriko fa ho sitrana amin'ity Ramatoa Brody ity… tsy isalasalana.
21 Aogositra 2009 amin'ny 7:55 PM
Nieritreritra aho taloha fa tsy misy mahalala hoe inona no ilana ny BCC. Niova hevitra aho.Mahazo vaovao sy famoahana PR mandritra ny tontolo andro miaraka amin'ny (indraindray) ANJATO adiresy mailaka ao amin'ny TO: saha (matetika ny anarana sy mailaka isaky ny haino aman-jery ao amin'ny fanjakan'ny Indiana avy amin'ny radio amin'ny fahitalavitra hanaovana pirinty, ny ankamaroan'izy ireo dia azoko antoka fa tsy tadiavinao ny hampahafantarana ampahibemaso ny adiresy mailaka azy ireo, raha tsy hiteny aho fa mino fa manitsakitsaka ny lalàna federaly izany, sa tsy izany?).
Heveriko fa fanahy iniana sy iniana atao izany amin'ny ezaka hampahafantarana ireo mandray ireo IZAY nahazo ny mailaka. Voalohany, mampiakatra ny maha-zava-dehibe ny mpandefa azy amin'ny alàlan'ny fampisehoana amin'ny mpijery marobe ny haben'ny ambaindain'izy ireo. Amin'ny fanaovana an'io koa dia mametraka tsindry kely (na angamba TSY faran'izay madinidinika) ny tsindry amin'ny mpandray hampiasa ilay fitaovana. Rehefa dinihina tokoa, raha toa ka nahazo ireto fitaovana ireto ireo fitaomana lehibe ireo ary mety hampiasa azy io, tsy tokony hampiasa izany koa ve aho?
Ary ny fehiny dia izao: azo antoka fa nahatonga anao Hiresaka momba izany ianao, sa tsy izany? Manontany tena ianao hoe firy ny olona mamaky ny bilaoginao ary manindry ny rohy omena? Inona no lazain'ny mpanao politika taloha? "Ny fanaovana dokambarotra ratsy dia tsara noho ny tsy misy mihitsy - tsindrio fotsiny ny anarako." Ianao no naka ny baon, tsipika hook ary sinker. Ary amin'io lafiny io dia nanao tsara ny asany tokoa izy.
24 Aogositra 2009 amin'ny 12:46 PM
Mahaliana izany… fa i Brody no resahina fa tsy ny mpanjifa. Mety ho olana izany!
21 Aogositra 2009 amin'ny 9:12 PM
Ny valinteninay manoloana izany dia: http://www.slaughterdevelopment.com/2009/08/19/th...
25 Aogositra 2009 amin'ny 8:39 PM
Ny tsy fanarahana BCC dia fadiranovana ATD mafy, saingy ao amin'ny PR dia tsy maintsy mandefa fampahalalana an-gazety amin'ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery marobe ianao - io no fomba tokana ahafahanao mampita izany amin'ny olon-drehetra raha mbola vaovao izy. Fantatro ny hatezeranao amin'ny famoahana ampahibemaso ny adiresy mailakao - ary marina ny fahatsapanao izany - saingy, amin'ny maha bilaogera anao, tsy aleonao ve mahafantatra momba ny tantara rehefa mitranga izany, ary vaovao sy vaovao, fa tsy miandry miandry anontaniana?
Tsy fantatro hoe manao ahoana izany any amin'ny fanjakana, fa eto Angletera dia misoratra anarana amin'ny tahiry fampahalalam-baovao manokana ny mpanao gazety mba hahafahan'izy ireo mandefa zavatra izay misy ifandraisany amin'ny olona izay mety tsy hidiran'izy ireo. Inona no tsy mety amin'izany?
25 Aogositra 2009 amin'ny 8:45 PM
Fanampin'izay, mety ho exec kaonty tanora ity, olona iray izay vao nanomboka tao amin'ny PR, ary nanao fahadisoana. Nopotehinao tanteraka izy. Fa maninona ianao no tsy dia salama? Farafaharatsiny tsy meloka ny hadisoany.
Tsy nila nandany volana maromaro tamin'ny fanangonana ny lisitra izy ireo - afaka mankany amin'ny Media Atlas, Vocus, Cision na tahiry media hafa ianao ary misintona ny lisitr'ireo mpanao gazety, bilaogera, tonian-dahatsoratra, mpamokatra… na ahoana na ahoana. Nandefa fanambarana an-gazety tamin'ny olona 227 aho omaly, androany dia niantso an-telefaona azy ireo aho raha te hampiasa azy ireo. Nahazo dinidinika sy fandrakofana marobe ho an'ny mpanjifako aho. Diso ve izany? Tsia. Ny fomba fiasa ihany ny zavatra - fantatr'izy ireo izany, fantatro izy io, ary tsy misy miangavy momba an'io.
25 Aogositra 2009 amin'ny 9:54 PM
PRMira, IZAY nataon'izy ireo, ary izay ataonao, dia TSY MAINTSY any Etazonia. Tokony hanome maodera opt-out ianao, raha tsy izany dia manitsakitsaka ny hetsika CAN-SPAM ianao. Fantatrao ve fa mametraka loza amin'ny orinasanao ianao? Atsaharo ny spam. Mametraha opt-n ​​ao amin'ny tranokalanao ary manangona adiresy mailaka amin'ny fomba mety - alalana amin'ny olona .DougSent avy amin'ny BlackBerry Verizon Wireless ahy
Aug 28, 2009 amin'ny 11: 38 AM
Tsy ataoko tandindomin-doza ny orinasako, satria ankafizin'ny mpanao gazety ny fandefasana vaovao izay mifandraika amin'izy ireo sy ankehitriny. Izany no fomba fiasan'ny PR ary faly amin'ny ankamaroan'ny olona ny fananganana azy, tafiditra ao ireo olona izay mandray ny fanambarana an-gazety. Indraindray ianao dia mety mandefa izany any amin'ny olona iray izay tsy misy ifandraisany, avy eo dia miteny aminao izy ireo, miala tsiny ianao ary tsy misy manoratra bilaogy ratsy momba izany.
Mazava ho azy fa tsy fantatro ny momba ny lalàna any Etazonia, fa satria Vocus, Cision, sns, miasa manerantany (heveriko fa orinasa amerikana angamba izy ireo), tsy azoko an-tsaina hoe hafa loatra izany. Tena mieritreritra aho fa mamorona tadio ao anaty teacup ianao. Tsy toy ny nandefasany mailaka ianao momba ny pilina fampitomboana ny filahiana na ny nangatahany ny antsipirian'ny bankinao - tena sombin-javatra PR io, raha ny marina, somary nalllsed izy rehefa tsy nahomby tamin'ny BCC, fa izany no habeny. Tsy ilaina ny fanararaotana tafahoatra anao.
28 Aogositra 2009 amin'ny 2:30 PM
28 Aogositra 2009 amin'ny 11:09 PM
"Ity no fomba fiasan'ny PR" dia tsy marina tsotra izao. Manana fifandraisana amin'ny orinasa PR marobe aho ary tsy manangona adiresy mailaka an'ny influencers eny an-tsena izy ireo raha tsy mahazo alalana avy eo ary SPAM amin'izy ireo. Manoro hevitra anao aho mba hamerina handinika ny paikadinao. Mety mahazo valiny ho an'ny mpanjifanao ianao, fa ny POTENTIAL hahazoana valiny tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fananganana fifandraisana mifototra amin'ny alalana dia lehibe kokoa.
Manoro hevitra anao aho mba hamaky ny lalànan'ny UK momba ny SPAM, "Ny orinasa dia mety mbola hatonina 'mangatsiaka' amin'ny alàlan'ny paikadin'ny mailaka saingy amin'ireo fotoana ireo dia tsy maintsy manana fehezan-dalàna ialan'ny mailaka."